भारतीय नाकावन्दीको समर्थन गर्ने गगन र बिरोध गर्ने राजनबीच कस्तो फैसला होला काठमाडौं चारमा ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
भारतीय नाकावन्दीको समर्थन गर्ने गगन र बिरोध गर्ने राजनबीच कस्तो फैसला होला काठमाडौं चारमा !
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आगमी मंसिर २१ गते हुने चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नं ४ राजधानी उपत्यकाको सर्वाधिक कौतुहलपूर्ण प्रतिस्पर्धाको क्षेत्र बन्न पुगेको छ । यसअघि कांग्रेस नेता गगन थापाले जितेको सो क्षेत्रमा उनै गगन उम्मेदवार हुँदा यस्तो कौतुहल थिएन, कारण उनीसँग टक्कर लिने उम्मेदवार डा. राजन भट्टराई थिएनन् ।
गगन यसै पनि भाषणवाज नेताका रुपमा चिनिन्छिन् त्यसमाथि उनको मिडिया मेनेजमेन्ट क्षमताले ‘कन्टेन्ट’ भन्दा ठूलो अवरण बन्यो । तर, यसपटक त्यही आवरण उजागर हुँदै गगनको कन्टेन्ट सतहमा आइपुग्नु नै उनका लागि प्रतिकुलता बन्ने विश्लेषण हुन थालेको छ ।
गगन थापा ०६२÷०६३ को जनआन्दोलनताका उनले गरेका लक्षदार भाषणले जन्माएको नेता हो । मिडियालाई चाहिने सामग्री दिनसक्ने उनको जति ठूलो खुवी छ, काममा उति नै कमजोर नेता हुन् भन्ने कुरा उनले लगातार चुनाव जितेको क्षेत्र नं ४ को अवस्थाले देखाउँछ । तर, गगनको वाकपटुता यस्तो छ, आफूलाई गत चुनावमा भोट दिने मतदाताले राखेका प्रश्नको उत्तर उनी सजिलै डा. राजन भट्टराईतिर पन्छाइदिन सक्छन् जसलाई काठमाडौं ४ का मतदाताले अहिलेसम्म मतदान नै गरेका छैनन् ।
गगन थापा ०६४ सालको निर्वाचनमा क्षेत्र नं ४ कै सिफारिसमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भए र ०७० सालमा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत उनलाई क्षेत्र नं ४ का मतदाताले भोट दिएर जिताए । अर्थात उनले आठबर्ष यस क्षेत्रको सांसदका रुपमा प्रतिनिधित्व गरीसकेका छन् ।
दुई कार्यकाल सांसद भएका थापालाई यसपटक मतदाताले प्रश्न सोध्ने नै भए । खासगरी कपन क्षेत्रको सडकको दुरावस्था हेरिनसक्नु छ । त्यहाँका मतदाताले गगनलाई प्रश्न गरे– ‘तपाईंलाई दुईपटक भोट दिएर सांसद बनायौं, यो सडकको हालत किन यस्तो भयो ?’
वाकपटु थापाले जवाफ दिए– ‘मैले गर्न नसकेकै हो, तर राजनजी पनि त सांसद हुनुहुन्थ्यो, यो बाटोमा धुलो उड्दा पानी हाल्न उहाँ किन आउनु भएन ?’ यही हो गगन थापाको कला, जसले उनलाई गगन बनाएको छ । प्रतिनिधिसभामा ६०१ सांसद थिए । ती मध्ये २४० जना निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष जितेका । त्यसै मध्ये पर्थे गगन । बाँकी सम्बन्धित क्षेत्रबाट समानुपातिक सूचीमा परेका र २५ जना विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका ब्यक्तित्वलाई सरकारले मनोनित गरेर सांसद बनाउने ब्यवस्था थियो ।
डा. राजन भट्टराई चुनावमा सहभागि भएर होइन, परराष्ट्र मामिलामा उनको विज्ञतालाई महसुस गर्दै सरकारले मनोनित गरेका सांसद थिए । उनको नाम गत चुनावमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष वा समानुपातिकमा परेर त्यसैबाट निर्वा्चित भएका होइनन् उनी । तर, गगन बाठा । गत चुनावमा आफूले विकास कबुल गरेर भोट लिएका जनताले प्रश्न गर्दा देखाइदिए उनै राजन भट्टराईलाई ।
चार वर्षअघि विकासको कबुल गरेर त्यसवापत भोट लिएका गगन, यसबीचमा भएको दुरावस्थाको जिम्मा लिंदैनन् । बरु अरु नै प्रक्रियाबाट संसदमा पुगेका प्रतिस्पर्धी राजनतिर त्यसको भागीदारी वितरण गर्छन् । यसले उनी जिम्मेवार जनप्रतिनिधित्व आफूबाट भएको महसुस आफैं गर्न सक्दैनन् भन्ने देखाउँछ । गगन उत्तर दिन्छन् । उत्तर दिनु र काम गर्नुबीचको भिन्नता पनि यही हो । गगनको उत्तर उनको भोटको आकांक्षा हो, गगनको काम कपनको सडक हो । गगनबाट मतदाताले उत्तर पाउँछन् काम होइन ।
एक अन्तरवार्तामा गगन भन्छन् । ‘अर्को कुरा मेरो प्रतिस्पर्धी (डा.राजन भट्टराई) पनि यसअघि सांसद नै हुनुहुन्थ्यो । यो क्षेत्रका जनताले दुःख पाएको विषय उहाँको पनि होइन र ? यो क्षेत्रका ८० प्रतिशत जनतालाई उहाँ सांसद हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा थाहा रैनछ । ‘म जहाँ गए पनि ए उहाँ पनि सांसद हो र ?’ भन्छन् । चार–चार वर्ष सांसद भएर उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो ? यो पनि जनताले जान्न पाउनुपर्छ ।’
सायद गगन यहाँ पनि वाकपटुताबाटै आफ्नो काम फत्ते गर्ने प्रयासमा छन् । तर, सत्य के हो भने गगन अस्ती संसद विघटन हुँदासम्म काठमाडौं क्षेत्र नं ४ को सांसद थिए, जसलाई त्यस क्षेत्रका जनताले भोट दिएर जिताएर पठाएका हुन् । डा. राजन भट्टराई पनि अवश्य सांसद थिए । तर, उनको क्षेत्र अलग थियो । उनी राष्ट्रिय जीवनमा ख्याती कमाएका विज्ञहरुको क्षेत्रबाट सांसद मनोनित भएका थिए । त्यसैले उनले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध पुनरावलोकन गर्न दुवै देशका सरकारले बनाएको विज्ञ समुहमा बसेर काम गरे ।
फेरि सांसद विकास कोष अन्तर्गतका विकास योजनाहरु आफू बसेको काठमाडौं ४ मै राजनले पनि खर्च गर्न सिफरिस गरे । गगन र राजनको कार्यक्षेत्रबीचको भिन्नतामा खेलेर आफूले नगरेका कामको दोषी राजनलाई बनाउने गगनको प्रयास यहाँनेर दुराशयपूर्ण छ ।
एउटै चुनावी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धामा रहेका डा. राजन भट्टराई र गगनका राजनीतिक र शैलीगत भिन्नता अवश्य छन् । गगन भाषणमा मास प्रभावित गर्छन्, मिडिया मेनेजमेन्ट र प्रोपोगाण्डा के के हुन सक्छन् त्यसको भरपूर प्रयोग गर्न उनी माहिर छन् । तर, त्यसको प्रतिफल मतदाताले होइन गगनले पाउँछन् । डा. राजन कामका योजना बनाउन खप्पिस छन्, कामलाई राजनीतिक दिशाले पार्ने प्रभाव बुझ्छन् र त्यसै अनुसारको राजनीतिक वातावरण बनाउन संवादमा उत्रिन्छन् । राजनको यो प्रबृत्तिको प्रतिफल कार्यान्वयन हुँदा गगनले दिनेजस्तो उत्तरमा मात्रै सिमित हुँदैन, त्यो काम बन्न पुग्छ ।
चुनावका बेला प्रोपोगाण्डाले अवश्य पनि केही भूमिका खेलेको हुन्छ । तर, प्रोपोगाण्डाको आयु भने छोटो हुन्छ । आज गगन थापा यति वाकपटु हुँदा हुँदै पनि केही प्रश्नहरुको उत्तर दिनै नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् । त्यसको एकमात्र कारण उनको राजनीतिको जग प्रोपोगाण्डा मात्र हुनु हो । गगन हरेकजसो चुनावी सभा र भेलाहरुमा असिनपसिन भएर आक्रामक भाषण गरिरहेका हुन्छन् ।
तर, गगनले प्रतिनिधित्व गरेको दलको चरित्र र ब्यवहारवारे उनका भन्ने कुरा हुँदैनन् । त्यसैले उनी आक्रोश बढी ब्यक्त गर्छन् । चुनावी कार्यक्रममा गगन विशुद्ध एउटा उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत हुन्छन् । उनी आफ्नो दल कांग्रेसलाई कहिँ पनि उल्लेख गर्दैनन् । यसको एकमात्र कारण उनले प्रतिनिधित्व गर्ने दल नेपाली कांग्रेसको भूमिका मतदाताबीच तीब्र अरुचीकर र अलोकप्रिय छन् ।
राजनीतिमा परिस्थिति कहिलेकाहिँ यति बलियो हुन्छ, जसले पात्रको वास्तविक चरित्रलाई मैदानमै उतारिदिन्छ र उसको प्रोपोगाण्डाको जग हल्लाइदिन्छ । अहिले गगन थापाका आक्रोशपूर्ण भाषण र प्रतिस्पर्धी डा. राजन भट्टराई प्रति अनावश्यक लक्ष्य साँधिएका वक्तब्यले त्यसलाई पुष्टि गर्छन् ।
दुईवर्ष अघि नेपालमा संविधान जारी गरेको विरोधमा भारतले नाकाबन्दी लगायो । गगन थापाको दल नेपाली कांग्रेस आफूलाई त्यहि संविधानको पिता घोषणा गर्छ । दिल्लीका एजेण्डा अनुरुप संविधान संशोधन गर्छु भन्दै त्यहि दलको सभापति अर्कै देशको प्रधानमन्त्रीसामु सार्वजनिक रुपमै बाचा गर्छ । आफ्नो देशको संविधान विदेशीको स्वार्थ अनुरुप संशोधन गर्ने र देशलाई निरन्तर परजीवी बनाउने दलीय चरित्रका प्रतिनिधि काठमाडौं ४ मा गगन थापा हुन् ।
गनलाई काठमाडौं ४ का मतदाताले दिने भोट भारतीय स्वार्थ अनुकूल संविधान संशोधन गर्न शेरबहादुर देउवाले प्रयोग गर्छन् । नाकाबन्दी लगाएर यातना दिने पक्षको स्वार्थमा त्यो भोट प्रयोग हुन्छ । त्यसको ठीक विपरित हुन्छ राजन भट्टराईलाई दिएको मतको प्रयोग ।
नेपालबारे निर्णय लिने अधिकारी नेपाली नै हुन्। नेपालले पाउने अन्तर्रा्ष्ट्रिय अधिकार कसैले गर्नु हुँदैन, नेपालले आफ्ना छिमेकी देशसँग आफ्नो हित अनुकूल मित्रवत सम्बन्ध राख्नुपर्छ, पारवहनको अन्तर्रा्ष्ट्रिय अधिकार नेपालले पाउनुपर्छ भन्ने अभियन्ता दलका प्रतिनिधि राजन हुन् । नाकाबन्दीवारे नबोल्ने, अझ नाकाबन्दीको मौन समर्थन नै गर्ने, नाकाबन्दी गर्नेकै रणनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने घोषित एजेण्डा बोकेर हिंड्ने र नेपालले आफ्नो हितमा अर्काे छिमेकी देशसँग गरेको पारवहन, यतायात लगायतका सन्धी कार्यान्वयनमा बाधा गर्ने दलका उम्मेदवार गगन थापालाई दिइएको मत देश विरोधी त्यही काममा प्रयोग हुन्छ ।
यसअर्थमा गगन मतदाताबीच राजनीतिक एजेण्डा बिहीन बन्न पुगेका हुन् । वाकपटुता र प्रोपोगाण्डाको जग यही बलियो तथ्यले भत्काइदिएका कारण गगन आफ्नो दलको एजेण्डा राख्न सक्दैनन् र आक्रोशपूर्ण अभिब्यक्तिमा उत्रिन्छन् ।
जव दलीय चुनावमा दलका एजेण्डा कमजोर हुन्छन् तव उम्मेदवार मतदाताप्रति भन्दा ज्यादा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारप्रति बढी अपिल गर्न पुग्छन् । गगनले काठमाडौं ४ मा बेच्ने आफ्नो वाकपटुता हो, प्रोपोगाण्डा हो, कांग्रेसको एजेण्डा होइन । कांग्रेसको एजेण्डा अहिले ब्यवहारिक परीक्षणबाट अस्वीकृत छ । त्यसैले गगनको अपिल मतदाताप्रति भन्दा डा राजन भट्टराईप्रति छ । किनभने काठमाडौं ४ का मतदाताले गगनको अपिल दुईवटा चुनावमा सुनेर त्यसको परीक्षण समेत गरिसकेका छन् ।
त्यसै कारण उनी राजनतिर आफ्ना असफलताको भारी पन्छाउने प्रयासमा छन् । राजन भने अलि बेग्लै तवरले मतदातासामु गएका छन् । राजन भन्छन्– ‘मेरो अपिल मतदातासमक्ष मात्रै हो, मेरा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारसँग होइन । म यसअघि विज्ञहरुको क्षेत्रबाट संसदमा पुगेको हुँ, त्यस क्षेत्रसँग सम्बिन्धित जिम्मेवारी मैले सफलतापूर्वक नै निर्वाह गरेको छु । काठमाडौं ४ मै बसोवास गर्ने भएकाले केही काम यहाँ पनि गरेको छु । म यही कुरा मतदातासमक्ष राखिरहेको छु ।’
4655 पटक पढिएको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउव...
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दा ख...
गोर्खा । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट...